फरक पाटो Archives - Harekpal
खेलकुद पनि ठूलो ज्ञान हो – जीवन पानी
साहित्य र अध्ययनबाहेक मेरो खेलमा रुचि छ । सानोमा फुटबल खेलिन्थ्यो, छेलो हानिन्थ्यो । छेलोका ३–४ वटा प्रतियोगितामा प्रथम पनि भएको छु । स्कुल स्तरीय लङजम्प, त्रिपलजम्प, हाइजम्प, रनिङ र एथलेटिक्सका प्रतियोगितामा पनि म प्रायः फस्ट, सेकेन्ड हुन्थेँ । मार्शलआर्टमा पनि रुचि छ । तर अहिले उमेरका कारणले पहिलाजस्तो खेल्न सक्दिनँ । पेसा र व्यस्तताले […]
समाजमा इष्टमित्र, शुभचिन्तकविना बाँच्न सकिँदैन – महेश प्रसाईँ
अर्को पाटो लेखनको अतिरिक्त मेरो रुचि भनेको साथीभाइ र इष्टमित्रसँगको भेटघाट हो । सङ्गीत सधैँ सुनिँदैन । यो सिजनल कुरा हो मेरा लागि । खेलकुदमा खासै रुचि छैन । भेटघाटमा रमाउने बानीचाहिँ उहिलेदेखिकै हो । वि.सं. २०२९ सालतिर धरानमा हुँदा गिरिराजमणि आचार्य, बम देवान र म बिहानदेखि चिया गफमा रमाउँथ्यौँ । पछि अशेष मल्लहरू धनकुटाबाट […]
लेखनबाहेकको मेरो रुचिको कुरा गर्दा कौशी खेती पनि एउटा हो । हामीले (श्रीमती र म भएर) घरको छतमा कौशी खेती लगाएका छौँ । जमिन त धेरै छैन – यस्तै सात सय स्क्वायर फुट होला । तर घरलाई पुग्दो मौसम अनुसारको तरकारीचाहिँ यहीँ उत्पादन गर्छौँ । हामी कौशीमा रायोको साग, तोरीको साग, करेला, बोडी, स्कुस, टमाटर, […]
मेरो शौख नै हो– खाना बनाउन नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्ने – पुष्कर लोहनी
अर्को पाटो केटाकेटीदेखिन् नै मेरो खानामा रुचि हो । आफैँले पकाएको खानामा म जुन स्वाद पाउँछु, त्यो अरूले पकाएको खानामा पाउँदिनँ । मलाई खाना पकाउँदा आनन्द लाग्छ । मेरो शौख नै हो– खाना बनाउन नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्ने र नयाँ–नयाँ खाना खाने । म खाना बनाउँदा तेल, घिउ र मसला धेरै नै हाल्छु । घरमा मलाई […]
हामी आफै रोगलाई निम्तो दिन्छौँ : मित्रसेन दाहाल
गाडीको पार्टपुर्जा, मेसिनरी सामान सबैलाई वाइलिङ गर्नुपर्ने, क्युरिङ गर्नुपर्ने, सफा गर्नुपर्ने, समय समयमा फेर्नुपर्ने, तर मान्छेको कुनै पनि अङ्ग त्यसरी फेर्दै नफेरी पनि, त्यस्तो कुनै ठूलो रोग लाग्दै नलागी पनि लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने – कस्तो अजीबको शरीर छ हाम्रो ! जापानमा १०० वर्षसम्म पनि शरीर चिरफार गर्नु नपरी, ठूलो रोग नलागी, केही नगरी बाँच्ने […]
(अशेष मल्ल नाटककार र कविका रुपमा चर्चित हुनुहुन्छ । हामीले यसपटक उहाँसँग साहित्यका बारेमा संवाद नगरेर अध्यात्मका बारेमा संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँको फरक पाटोमाथिको दृष्टिकोण । ) धर्म अलग हो, अध्यात्म अलग हो । म कुन धर्ममा विश्वास गर्छु, मेरो लागि त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । म अध्यात्मको कुन गहिराइमा छु, त्यो […]